Maareyaha wakaalada maalgalinta DDSI iyo masuliyinta gobolka shabele oo boqasho-hawleed ku tagay mashruuca waxsoo-saarka Dalagyada beeraha Ee laga hirgaliyay degmada Beer-caano ee Gobolka Shabele - Cakaara News
Maareyaha wakaalada maalgalinta DDSI iyo masuliyinta gobolka shabele oo boqasho-hawleed ku tagay mashruuca waxsoo-saarka Dalagyada beeraha Ee laga hirgaliyay degmada Beer-caano ee Gobolka Shabele
Beer-caano(cakaaraNews) Arbaco Oct 02,2013.Masuuliyiin isugu jirta heer-deegaan heer-gobol heer maamul-magalo iyo heer-degmo ayaa kormeer shaqo ku tagay mashruuca wax-soosaarka beeraha (Agro industry) ee ku yaala tuulada barda-qorax oo ka tirsan Degmada Beercaano Ee gobolka Shabeele. mashruucan wax-soosarka beeraha ayaa waxaa hirgaliyay oo iska lahaa maalgashigiisa muwaadin Qurbajooga oo u dhashay DDSI oo Lagu Magacaabo Maxamed,islamarkaana galiyay aduun lacageed oo malaayiin kor u dhaafaya.
mashruucan ayaa kamida mashaariicaha Maalgalineed ee ugu waawayn DHinaca wax-soosarka Beeraha waxaana uu ku fadhiyaa Dhul baaxadiisu Dhantahay 4kun oo Hektar iyadoona lagu maalgaliyay Aduun lacageed oo dhan 23 milyan oo Birr waxaana fursado shaqo oo joogto ah u abuuray 45 xubnood oo Shaqaale rasmi ah iyo Boqolaal daily labour ah.
Hadaba Waftigan Booqashada ku Tagay Mashruucan oo uu horka cayay Maareeyaha wakaalada Maalgalinta DDSI mudane C/naasir maxamed oo ay wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka Gobolka shabeele,maayarka maamulka magalada Godey,gudoomiyaha degmada beer-caano iyo Mulkiilaha Maalgaliyay Mashruucan Mudane Maxamed.
Masuuliyiinta iyo Mulkiilaha ayaa waxay kormeer shaqo kusoo sameeyeen Qaybaha kala gadisan ee uu ka kooban yahay mashruucan (Agro industry) Halkaaas oo ay ka socotay hawlo shaqo oo aad ubalaadhan sida Goynta Suufka,Sisinta,Lawska,Noocyada Ubaxyada ugu qaalisan Dunida,basasha iyo Dalagyo kalaba.
sanadihii ugu danbeeyay waxaa kusoo kordhaya deegaanka soomalida itoobiya dadka maalgashiga ka samaysanaya DDSI kuwaas oo ay kamid yihiin Qurba joogta Udhalatay Deeganka soomaalida itoobiya oo uu ka mid yahay Muwaadinkan mashruucii ugu waynaa Dhanka dalagyada Beeraha ka sameeyay Deegaanka gaar ahaan Degmada Beercaano iyadoona Khabiirada Khibrada u leh Beerista Midhaha ee ka hawlgalaya Mashruucan ay Yihiin Dad u dhashay Dalka Turkiga oo ay lacag badani kaga baxayso Mulkiilaha.